Nyocha banyere Flekosteel, nlebanya dị mma na nke na-adịghị mma
Nyocha banyere Flekosteel
Nnakwe Uka, 33 Afọ, Suru-Lere
M na-agakarị mgbatị ahụ ma na-enwe mmasị ịgba ọsọ. N'ezie, mmasị dị otú ahụ maka egwuregwu adịghị ezu n'enweghị mmerụ ahụ. Flekosteel na-enyere m aka ịnagide mgbu nkwonkwo n'oge ọdịda. Achọtara m gel na mberede, chọpụta ya na ụfọdụ forum. Agbalịrị m ya, nsonaazụ ya masịrị m. Ọ tụrụ m n'anya na ude nkwonkwo nwere naanị ihe ndị sitere n'okike.
Ogo onye ọrụ Flekosteel